प्राप्त गर्न कसरी एक बालिका फोन नम्बर एकल मानिस गरेको प्रमोदवनमा
अन्तिम रात म भेट एक सुन्दर जवान महिला । मेरो परमेश्वरले त्यो सिद्ध थियो, अग्लो स्लिम, सुन्दर अनुहार, सिद्ध मुस्कान । त्यो थियो स्मार्ट र उत्तम छ । कुरा सिद्ध अंग्रेजी पनि ।. म उडा । म दिनेछु तपाईं केही सूचक, त तपाईं बनाउन छैन यो नै गल्ती छ । सबै को पहिलो, तपाईं निर्माण गर्न आवश्यक केही प्रकारको जडान संग एक केटी पहिले माग्दै उनको नम्बर । कहिल्यै बस स्थान एक प्यारा केटी भर देखि कोठा, उनको दृष्टिकोण चिसो र सोध्न लागि उनको नम्बर । यो बन्द आउछ रूपमा अजीब, केटा हेरिसकेकी छ्यौ र छली छ । भने पनि त्यो तपाईं आकर्षित हुन्छ, त्यो गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ थाहा पहिले तपाईं सहज महसुस गर्न पर्याप्त विनिमय संख्या । मेरो मित्र प्रयोग यो»बन्दूक दृष्टिकोण»एक रात थियो जो राम्रो उल्लसित । जब क्लब बन्द, उहाँले हिंडे भीड माध्यम बाहिर रोकिराखेको आफ्नो मा आफ्नो हात छ । उनले सोधे कुनै पनि प्यारा केटी त्यो देखे लागि उनको नम्बर । यो थियो बस एक मातेको प्रयोग र हामी सबै थियो राम्रो हांसो शो हेरिरहेका छन् । उहाँले वास्तवमा प्राप्त गरे धेरै संख्या यो तरिका, तर म कहिल्यै प्रयास सिफारिस. कारण छ, कुनै पनि केटी गर्ने हात बाहिर उनको नम्बर भनेर चाँडै हुनेछ, कम-गुणवत्ता आशा छ । अर्थ, त्यो शायद उनको दिन्छ संख्या बाहिर गर्न यति धेरै मान्छे, त्यो छैन पनि सम्झना, जो तपाईं छन् जब तपाईं पाठ उनको छ । निर्माण जडान संग एक केटी रही अघि उनको नम्बर, त्यो छ धेरै अधिक संभावना गर्न तपाईंलाई सम्झना र प्रतिक्रिया गर्न आफ्नो पाठ । तपाईं केहि सम्झना गर्न बारेमा बालिका । बहुमत हो अस्थिर जीव । एक सेक्सी केटी छ प्रशस्त विकल्प र मान्छे मारा तिनीहरूलाई मा निरन्तर छ । तिनीहरूले शायद चिन्ता प्रतिक्रिया गर्न केही आगन्तुक गरेको पाठ संदेश जब त्यो मान्छे दर्जनौं प्रयास गर्न मीठा कुरा उनको दैनिक. अलग आफैलाई सेट देखि भीड । जब म भन्न»एक जडान बनाउन»केटी संग पहिलो, विनिमय जीवन कथाहरू र सपना भविष्यको लागि बस एक प्रकाश- कुराकानी ठीक छ । आफ्नो लक्ष्य यहाँ सिर्जना गर्न छ, सान्त्वना, उनको संग र आउन बन्द एक आराम रूपमा, रमाइलो मान्छे भनेर त्यो थियो रमाइलो समय खर्च छ । जान सबै बाटो मा प्रलोभन चरण वा यहाँ पनि सोध्न उनको एउटा मिति मा बाहिर छ । म छैन जान पनि गहिराई मा बारे सुरुमा दृष्टिकोण र माथि टिप्न लाइनहरु यहाँ यो पोस्ट बस रही बारेमा उनको फोन नम्बर तर सदस्यता र अधिक लागि डेटिङ सल्लाह किनभने म एक धेरै ठूलो सामान बाटो मा छ । प्रयास संग बन्धन उनको भन्दा एक साधारण चासो छ ।, तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ, उनको बारेमा एउटा भयानक पार्टी मा अन्तिम रात । वा सोध्न भने, त्यो गए भन्ने ठूलो कन्सर्ट अन्तिम हप्ता । तपाईं जिम मा, उनको सोध्न भने त्यो चलिरहेको छ, स्थानीय म्याराथुन अर्को महिना । तपाईं छन् भने एक रेस्टुरेन्ट मा, उनको सोध्न भने त्यो कुक सक्छन्. उनको बताउन तपाईं गरे थाई कुकिंग वर्ग जब तपाईं भ्रमण गरेका थिए सियाङमाइ मा. तपाईं भाग मा एक रोचक कुराकानी बारे उनको चासो, तर पनि कसरी देखाउने मजा र रोचक आफ्नो जीवन छ । पढ्न सिक्न शरीर भाषा छ । यदि त्यो जस्तै देखिन्छ त्यो भएको छैन, मजा, वा त्यो छोड्न चाहनुहुन्छ त बन्द फिर्ता.
तर यदि त्यो हँसिला र आनन्दित कुराकानी, त्यसपछि आफ्नो फोन बाहिर पुल र, भन्न के आफ्नो फोन नम्बर, तपाईं केहि.
मा एक अजीब रोक्नका र भन्न ।
के मा निर्भर देश हो, मान्छे प्रयोग विभिन्न च्याट आवेदन छ र तरिकामा रहन जोडिएको छ । बरु उनको फोन नम्बर, म सामान्यतया सोध्न उनको लाइन लागि आईडी, आदि. म धेरै प्रयोग गर्न रुचि एक च्याट आवेदन मा एक फोन नम्बर वा, तर म मा जाने बारे जानकारी एक पछि मिति मा कि.
ठीक छ जहाँ यो छ
म गडबड माथि अन्तिम रात, म थिएन पालन मेरो आफ्नै नियम छ । सोध्न पक्का हुन लागि केटी उनको फोन नम्बर रूपमा चाँडै रूपमा सम्भव छ । तपाईं देख्न भने एक सुरुको गर्न, यो सोध्न, त्यसपछि सोध्छन् । यो भएको छ मेरो नाश धेरै पटक र अन्तिम रात थियो एक प्रमुख उदाहरण छ । म भएको यो देखेर केटी वरिपरि धेरै सप्ताह लागि. त्यो सधैं झुन्डियो को नै समूह संग मान्छे र त्यो एक प्रेमी छ जब म उनको देखे पट्टी मा एक्लै, म संग च्याट गर्न सुरु उनको छ । बाहिर जान्छ त्यो साँच्चै मीठा र हामी यो बन्द मारा । त्यो त्यो बस हालै उनको संग भङ्ग मानिस र त्यो अब एक छ । हामी एक्लै थिए र भएको एक ठूलो कुराकानी धेरै मिनेट को लागि र म सोध्न थिएन उनको लागि नम्बर मेरो टाउको मा मलाई लाग्यो । पछि, के को हतार छ । खैर, सबै अचानक उनको पैक को दस मित्र माथि देखाए र शनि पट्टी मा हामीलाई संग. उनको मित्र कुरा सुरु उनको कान बन्द । त्यसपछि. केही मान्छे थिए, उनको पूर्व प्रेमी’ मित्र’ लामो कहानी कम छ, मेरो सिद्ध मौका सोध्न थियो । त्यो घेरिएको थियो मित्र अब । हामी थियो सबै मा एक ठूलो समूह, र म चाहँदैनथे रोक्न कुराकानी गर्न लागि सोध्न उनको फोन नम्बर । म यो जान गरौं यो मुख्य पाठ यहाँ छ । कहिल्यै आफैलाई गर्न लाग्छ, म ठीक छौँ सोध्न लागि उनको नम्बर पछि । पछि मतलब सक्छ कहिल्यै. केहि हुन सक्छ र छ भने तपाईं हेर्न एक मौका त्यसपछि तपाईं काम गर्न आवश्यक अब छ । जान्छ कि लागि जीवन मा केहि पनि. सोधेर को लागि एक केटी गरेको फोन नम्बर को सामने मा उनको मित्र ठीक छ । तर, जब तपाईं संग काम गर्दै छन् रूढिवादी बालिका मा विदेशी संस्कृतिका तिनीहरूले अक्सर चिन्तित संग आफ्नो छवि । यस उदाहरण मा यो मान्छे थिए सबै भियतनामी, र यो एक पल्ट केटी भने पनि त्यो मलाई रुचि, त्यो महसुस हुन सक्छ अनौठो दिने बारेमा केही विदेशीले उनको नम्बर संग सबैलाई खोजिरहेको छ । तपाईं बस संग जान आफ्नो पेट मा यी परिदृश्यहरु । म समय निर्णय ठीक थिएन. संख्या प्राप्त प्रारम्भिक, चिन्ता छैन. म अक्सर सोध्न लागि, एक केटी गरेको संख्या एक नजिक कुराकानी. बाहिर ज्यादातर को आवश्यकता किनभने म जान आवश्यक छ । पछि एक छिटो च्याट म भन्न हुनेछ,»अरे म दु: खी छु म जान छ । म चाहन्छु जारी गर्न यो संवाद अर्को समय । के आफ्नो नम्बर त म गर्न सक्छन् तपाईं पाठ पछि ।»अक्सर व्यस्त हुनुको छ, एक राम्रो कुरा हो । भने पनि म छु रहन मा एक पल्ट, म भन्न हुनेछ,»ठीक छ राम्रो कुरा तपाईं संग, तर म फिर्ता प्राप्त गर्न आवश्यक भन्दा मेरो मित्र अब । पहिलो गरौं विनिमय संख्या साँच्चै छिटो छ ।»यो बस मा निर्भर गर्दछ के तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ. शायद उनको भन्नुहोस्,»ओह, माफ गर्नुहोस् म प्रेम चाहन्छु रहन र च्याट, गर्न अन्धा बच्चाहरु मा एक अनाथालय.
पछि ।»बस संग रचनात्मक प्राप्त
अन्तिम बिट को सल्लाह गर्न छ बस साहसी हुन छ । साँच्चै भने, तपाईं जस्तै एक केटी बस उनको बाहिर सोध्न. के हुन सक्छ भनेर खराब छ । त्यो कुनै भन्न र, कसले ख्याल राख्नुहुन्छ । तपाईं अर्को एक पाउन छ । त्यहाँ प्रशस्त सेक्सी जवान गधा वरिपरि चलिरहेको यो ग्रह मा छ । प्राप्त छैन, सबै ह्याङअप मा एक. म यो छ कसरी थाहा फिर्ता, खेल मा एक प्राप्त र भावनात्मक निवेश छ । म सधैं चाहन्थे सबै कुरा प्राप्त गर्न सही र जब यो बाहिर काम गरेन, म प्राप्त हुनेछ, धेरै निराश छ । म सधैं मेहनत गरे र यो लिए व्यक्तिगत जब म असफल भयो । अब म भएको छु एशिया मा एक वर्ष भन्दा लागि मेरो जीवन परिवर्तन भएको छ, म साँच्चै के हुन्छ । यदि म एक केटी जस्तै, म हिंड्न सही अप गर्न उनको र कुराकानी सुरु. यदि त्यो मा छैन मलाई म दूर हिंड्न र अर्को एक पाउन छ । म कहिल्यै यो दिन एक दोस्रो लाग्यो । मा डाइविंग यी परिस्थितिको बारेमा हेरचाह बिना नतिजा मदत गरेको छ, मेरो खेल एकदम छ । बरु आफैलाई माथि र पुग्न केही तातो जस्तै डर खरायो, म सिर्फ शान्तपूर्वक हिंड्न माथि गर्न को कुनै पनि समूह बालिका र कुराकानी सुरु. म सामान्यतया प्राप्त स्वागतको र चासो समूह देखि. यति नतिजा बारे तपाईं आराम गर्न सक्छन् र आनन्द को बातचीत को सट्टा विचार आफ्नो अर्को कदम वा»खेल छ ।»तपाईं परेशान हो कि तपाईं सोचिरहेका छन् आफैलाई रोक भन्ने बकवास हो । तपाईंको मन आराम र प्रवाह संग जाने । यो जीवन वा मृत्यु अवस्था यहाँ छ । यो आशा जानकारी मदत गर्छ. सबै पनि अक्सर मान्छे छोड्न क्लब र तिनीहरूले लात मार मा आफूलाई गधा लागि सोधेर छैन लागि त्यो तातो केटी गरेको फोन नम्बर । के तपाईं बस गर्न आवश्यक छ बलमा दृष्टिकोण गर्न र मौकाको फाइदा उठाउनुहुन्छ भने, यो त्यहाँ छ । अक्सर मान्छे असफल माध्यम पालन गर्न छ र वास्तवमा लागि सोध्न नम्बर । कि खराब महसुस मलाई भरोसा मलाई थाहा छ, यो भयो अन्तिम रात । कुराहरू थिए ठूलो रहेको संग यो केटी र म छु, सय उनको नम्बर भने म पहिले सोधे. ओह खैर, म कहाँ थाहा त्यो बाहिर झुन्डियो. म फिर्ता लागिरहेको छु, आज राती र म प्राप्त हुनेछ उनको नम्बर । यो छैन भन्दा सम्म म जीत ।
← आफ्नो भ्रमण मेक्सिको मा शहर । डेटिङ साइट मेक्सिको निःशुल्क, बिना दर्ता, लागि गम्भीर सम्बन्ध छ ।
अनलाइन डेटिङ साइट मेक्सिको सिटी बिना दर्ता →